Farta muhiimka ah ee carruurta | Hal-abuurka khadka tooska ah
Farta carruurta ee muhiimka ah
Iris Gamen | 06/05/2022 23:00 | dhowr
Maqaalka maanta, waxaan sameyn doonaa a ururinta farta carruurta ee ku habboon naqshadaynta mawduucan. Haddii aad gacanta ku haysato mashruuc nakhshad ama aad samaynayso wax la xidhiidha guriga ugu yar, hubaal waxaad u baahan tahay tixraacyo farta qoraalka ah ee diiradda saaraya dadweynahan.
Malaha, waxaad xaqiiqsatay in raadinta qoraalka saxda ah si loo gaaro naqshadeynta carruurta ay noqon karto mid adag. Waxaa jira far badan oo jira wayna adkaan kartaa in la helo midda saxda ah taasi waxay ku siin doontaa naqshadaada taabashada ugu dambeysa.
Farta carruurta ee aad ka heli doonto qaybta xigta waxay si sax ah ugu shaqayn doonaan nooc kasta oo mashruuc ah oo aad ka shaqaynayso ama aad ku shaqaynayso. Ku dhex qarxi noocyada kala duwan ee aan kuu dooranay, soo deji, isku day oo samee.
1 Farta carruurta ee muhiimka ah
1.1 Xayawaanka Xayawaanka ah
1.3 Mama orso
1.5 Xisbiga Warqada
1.8 wiil gantaal ah
1.9 Dareen Qabasho
1.11 Sheeko cirfiid
1.12 Nooca loo yaqaan 'Chirrup Typeface
Bal u fiirso dhammaan tusaalayaashan aan idiinku soo gudbinayno qaybtan farta carruurta. Dooro midka ku habboon baahiyahaaga oo u qaado naqshadaada heer kale, adigoo had iyo jeer ixtiraamaya bilicda carruurta.
Xayawaanka Xayawaanka ah
Meeshan ugu horraysa waxaanu ku soo qaadanaynaa a lyrics waxaa dhiirigeliyay xayawaanka xayawaanka, taas oo ka dhigaysa jilayaashiisa kuwo qurux badan oo qosol leh. Mid kasta oo ka mid ah xarfaha waxay ka dhigan tahay nooc xayawaan ah, taas oo ka dhigaysa mid aan suurtagal ahayn in la rabo in la isticmaalo dhammaan xarfaha alifbeetada.
Si fiican ayuu ugu shaqeeyaa nashqado leh qurux caruureed sida kaararka dhalashada, funaanadaha, boorsooyinka dhabarka, calaamadaha gaarka ah, iwm.
Una il dahsoon oo hawo cabsi leh leh ku habboon dabaaldegyada la xidhiidha Halloween, kaas oo lagu cabsi geliyo kuwa yaryar. Waxaad ku isticmaali kartaa kaararka, martiqaadyada xafladda, boodhadhka, funaanadaha, iwm.
batboo, waxa ku jira xarfo far waaweyn oo keliya Laatiinka, nambarada, calaamadaha xarakaynta iyo shan astaamood oo bahal ah si loo dhamaystiro naqshadahaaga.
Waa oo ku salaysan bahalaha kaynta ku nool, waa weji qoraal ah oo kulmiya waji qurxoon oo madadaalo leh oo ka mid ah xarfaha. Far labajibbaaran, laakiin ay ka buuxaan tafaasiil siinaya saameyn carruurnimo iyo qurux badan.
Si fiican ugu shaqeeya naqshadaynta tifaftirka carruurta, funaanado, qurxinta iyo xitaa calaamadaha qaybta carruurta sida dukaanka dharka.
Madadaalo, dhow, wax ku ool ah oo leh qaab caruureed oo cad, fartaani waxay isu keentaa dhammaan. Abuuritaankeeda, waxaa dhiirigeliyay boodhadhka filimada ee 60-meeyadii sababtaas awgeed waxay leedahay qaabkan gaarka ah.
Waxaa ka mid ah galalkaaga Waxaad ka heli doontaa in ka badan 175 ligatures taasi kaliya maaha inay caawiso inay siiso dareenka farta farta lagu qoray, laakiin iyaga waad ku mahadsan tahay waad abuuri kartaa.
Naqshad ku salaysan calaamado, fartaani waxay leedahay waxyoonay garlands Calan saddex xagal ah oo la dhigo sida qurxinta xafladaha dhalashada.
Haddii aad u isticmaasho naqshadahaaga, si sax ah ayay u shaqayn doontaa haddii aad rabto inaad samayso martiqaad xisbi, Xayeysiiska sannad-guurada, bixinta hawo madadaalo iyo madadaalo leh. Marka laga reebo alifbeetada, wejigani waxa uu ku siinayaa taxane doodle ah oo aad ku dari karto shaqadaada.
Tusaalaha kale ee ugu fiican ee qoraalka carruurta waxaa dhiirigeliyay qorista kuwa yaryar. Waa font aad u fiican oo ku siinaya, markaad la shaqeyneyso, tiro badan oo glyphs ah iyo ligatures si aad u awooddo inaad abuurto naqshad leh qaabkaaga.
Kido, waa a font madadaalo leh oo si fiican ugu habboon taageero kasta oo aad u baahan tahay, iyada oo ay ugu wacan tahay geesinimada aadka u muuqata.
Sida magaceeda ka muuqata, waa a qoraalka ku salaysan donut, kuwaas oo scones wareeg ah dhadhan macaan leh. Waa xarfo xarfo leh oo leh istaroog dhumuc weyn leh oo wareegsan laakiin aan caadi ahayn jilayaasha, sidaas darteed waxay abuurtaa firfircooni.
Waxaad awoodi kartaa ka faa'iidayso taageero kasta oo aad u baahan tahay, maadaama ay si sax ah ula qabsato, waxaad samayn kartaa naqshadaha dharka, dharka carruurta, martiqaadyada, baakadaha, iwm.
wiil gantaal ah
Xarfaha ku dayanaya gacan-qorista ayaa badanaa ah a ikhtiyaarka saxda ah haddii aad raadinayso qaab caruureed. Aad bay u soo jiidanayaan oo xataa haddii ay ku daydaan farta farta lagu fiiqo ee uu sameeyay ilmo yar.
Rocketboy, waa mid ka mid ah kuwan farta carruurta ee farta gacanta lagu qoro, waxa ku jira far waaweyn, far yar, tiro, iyo xarfo xarago leh. Haddii shaqada naqshadeyntaada ee qurxinta carruurta ay leedahay sawirro madadaalo leh, ha ka waaban inaad adeegsato nooca noocaan ah si aad u dhammaystirto.
Waxaan kugula talineynaa inaad isticmaasho fartan madadaalada leh gudaha naqshadaynta tifaftirka ee loogu talagalay kuwa yaryar, kaararka dhalashada ama tusaale ahaan boodhadhka carruurta. Waa qaab aad u xiiso badan, kaas oo leh laqabsiga alifbeetada oo kala duwan.
Waxaad awoodi doontaa inaad ku shaqeyso xarfaha waaweyn iyo kuwa yaryarba, iyo sidoo kale Dareemada Qabashada Waxay kuu ogolaaneysaa inaad isticmaasho seedaha yaryar si aad u gaarto qaab gaar ah oo ku jira hal-abuurkaaga. Sawir madadaalo leh iyo midabyo dhalaalaya, waxaad ku guuleysan doontaa naqshad gaar ah oo carruurta ah.
Hubaal inaad taqaan ilmo jecel dinosaurs, sababtoo ah tani Qoraal-qoraalka Rex-ku dhiirigeliyay waa mid iyaga u ah. Waa nooc geesinimo leh, oo leh hab-buuxa oo carruurnimo leh.
Waa doorasho ku habboon naqshadaha carruurta ee ay dhiiri galiyeen xayawaankan taariikhda ka hor, si aad u wanaagsan ayuu uga shaqeeyaa dhexdhexaad kasta iyada oo ay ugu wacan tahay sharcinimada weyn ee ay bixiso labadeeda miisaan.
Fuente sawir-gacmeed lagu qoray oo leh qaab qurux badan oo qurux badan. Waa doorasho fiican oo loogu talagalay naqshadaha sawirada, buugaagta, martiqaadyada, dharka, guud ahaan nooc kasta oo naqshadeed oo loogu talagalay guriga ugu yar.
Nooca loo yaqaan 'Chirrup Typeface
Iyadoo a qoraal qasan, waxa nalagu soo bandhigay qoraalkan ku dayashada burushka qoritaanka midabada biyaha. Waxaad samayn kartaa nashqad kasta oo caruur ah oo maskaxdaada ku soo dhacda adiga oo isku daraya farmaajo, xarfo yar, lahjad iyo xuruuf gaar ah.
Bal qiyaas calaamad ama kaarka martiqaadka oo leh wejigan oo ay la socdaan midabyo dhalaalaya, si fudud isku darka guusha.
Sida magaceeda ka muuqata, meeshan u dambaysa waxaanu ku soo qaadanaynaa a typography macaan oo ay dhiiri galiyeen alaabtan. Ma aha oo kaliya inaad ka heli doonto alifbeetada xarfaha waaweyn iyo kuwa yaryar, laakiin waxay sidoo kale ku siinaysaa tiro badan oo ah astaanta vector ee macmacaanka kala duwan si aad ugu darto mashaariicdaada oo aad uga dhigto mid sii macaan haddii aad awoodid.
Waxaan rajeyneynaa inaad heshay farta ugu fiican si aad u gaarto naqshad caruureed oo qumman, iyo sidoo kale qurux badan. Si nashqadaadu u noqoto mid gaar ah, waa inaad maskaxda ku haysaa in dhammaan walxaha ka kooban shaqadu ay tahay inay u shaqeeyaan si wada jir ah. Doorashada farta saxda ah waxay noqon kartaa jilbaha keega.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Farta carruurta ee muhiimka ah
plugins Photoshop lagu taliyay